एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेण्टको आईपीओ आजदेखि विक्री खुला
साउन १६, काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेडले शुक्रवारदेखि ३१ लाख ६० हजार १८३ कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणका लागि विक्री खुला गरेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता आईपीओ मध्ये १ लाख ६९ हजार ९०२ कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँट पश्चात ६७ हजार ९६१ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित राखी बाँकी रहेको उक्त शेयर सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री गर्न लागेको हो ।
विक्रीका लागि छिटो अवधि साउन २१ गते र ढिलो अवधि भदौ ५ गतेसम्मका लागि तोकिएको यो आईपीओ खरीद गर्न चाहनेहरुले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ३१ लाख ६० हजार १८० कित्तासम्म माग गर्दै आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उक्त कम्पनीको आईपीओ खरीदका लागि सि–आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत आफैले घरमै बसेर दिन आवेदन दिन सकिनेछ ।कम्पनीको आईपीओको विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले औषतभन्दा तलको आधारलाई संकेत गर्ने केयर एनपीआईपीओ ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
हाल उक्त कम्पनीको संस्थापकतर्फबाट चुक्तापूँजी रू. ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार रहेको छ । आईपीओ विक्रीपश्चात यो पूँजी रू.१ अर्ब १३ करोड २६ लाख ८२ हजार पुग्नेछ । आईपीओ विक्री पश्चात संस्थापकतर्फ ७० र सर्वसाधारण तर्फ ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ ।
विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुको लगानीलाई एकीकृत गरी नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउने उदेश्यले उक्त कम्पनी विसं २०६९ साल भदौ ३१ गते स्थापना भएको हो । उक्त कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी गरेको छ ।
कम्पनीले अन्य पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताएको छ । कम्पनीको वास्तविक सञ्चित नाफा रू. १ करोड ६३ लाख १९ हजार रहेको छ । यो नाफा आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ सम्मको हो ।
कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०२ दशमलव शून्य ६ रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमल शून्य ४ छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भई कारोबारका लागि मूल्यको सीमा तय गर्दा नेप्सेले प्रतिशेयर नेटवर्थको तीन गुणासम्मको मूल्य तोक्न सक्छ ।